ONLYOFFICE Docs 7.1 inosvika nerutsigiro rweARM | Linux Addicts
Kutanga kwe iyo itsva vhezheni yehofisi suite ONLYOFFICE DocumentServer 7.1 nekuita kwesevha yeONLYOFFICE online edhita uye kubatana.
Nekubatana panzvimbo yako wega, unogona zvakare kushandisa Nextcloud Hub chikuva, chinopa kusanganisa kwakazara ne ONLYOFFICE. Yakagadzirira kuvaka inogadzirwa yeLinux, Windows, uye macOS.
ONLYOFFICE inoti inoenderana zvizere neMS Office uye OpenDocument mafomati. Mafomati anotsigirwa anosanganisira: DOC, DOCX, ODT, RTF, TXT, PDF, HTML, EPUB, XPS, DjVu, XLS, XLSX, ODS, CSV, PPT, PPTX, ODP. Izvo zvinokwanisika kuwedzera kushanda kwevapepeti kuburikidza nemapulagi, semuenzaniso mapulagi anowanikwa pakugadzira matemplate uye kuwedzera YouTube mavhidhiyo.
1 ONLYOFFICE Docs 7.1 Main Zvitsva Zvimiro
2 Tora ONLYOFFICE 7.1
ONLYOFFICE Docs 7.1 Main Zvitsva Zvimiro
Muiyi vhezheni itsva inosimbiswa kutie yakapa rutsigiro rwekuisa ONLYOFFICE pane masisitimu ane ArM architecture.
Chimwe chitsva chinomira pachena ndechekuti inokurudzira gwaro idzva rekuona muPDF, XPS uye DJVU mafomati, inoratidzirwa nekuita kwepamusoro uye kugadzirisa kwese mashandiro kudivi revatengi. Nezvezvimiro zvemuoni mutsva, kune zvakare sidebar ine zvigunwe zvemapeji egwaro, bhari yekufambisa, nzira yekusarudza nemaoko nzvimbo mugwaro, chikamu chine ruzivo pamusoro pefaira, uye kukwanisa kufamba kuburikidza nekunze uye mukati mekubatanidza.
Mukuwedzera kune izvi, zvinoratidzwa zvakare kuti akawedzera menyu nyowani yekuisa nekugadzirisa maumbirwo muvaparidzi vose. Icons dzakawedzerwa kune ese akatsanangurwa manhamba uye rondedzero yeakamboshandiswa manhamba anopihwa zvakare.
Kune rumwe rutivi, tinogonawo kuwana izvozvo ikozvino pane nzira yekugadzirisa iyo geometry yenhamba nekuisa zvibodzwa zveanchor negonzo, pamusoro pekuchinja chishandiso chekusarudza gwara rekuzadza chimiro ne gradient. Iyo gradient yekuzadza icon inoratidza mavara akasarudzwa.
Zvinocherechedzwawo kuti yakawedzerwao rutsigiro rweSmartArt zvinhu iyo inoshanda isina kuashandura kuita mapoka ezvimwe zvinhu uye chiziviso chekuzivisa pakudimburwa uye kudzoreredzwa kwekubatanidza chaitwa, pamwe nerutsigiro rwekushandura mafaera ePDF/XPS kuita gwaro rinogadziriswa reDOCX mupepeti yegwaro.
Wakawedzera a zvishandiso zvitsva tab "Tarisa" iyo inopa marongero ekutaridza magwaro uye mharidzo, senge theme, gwaro chinzvimbo, zoom level, toolbar, uye status bar kuratidza.
Iko kugona kubvuma uye kuramba shanduko kuburikidza nemenu yemukati inopihwa.
Yakawedzerwa rutsigiro rwekutsanangura mavara akakosha paunenge uchitsvaga magwaro.
Chikamu chine zviratidzo zvemari chawedzerwa kubhokisi rekusarudza mafomati enhamba mumaseru.
Sezvo iwe uchipinza mafomula, pop-up mazano anopihwa anopa akakodzera fomula sarudzo.
Yakawedzera menyu yemukati kuti ufambise maspredishiti.
Iko kugona kuvhura nekuvhara mapoka mukuona uye maitiro ekutaura kunopihwa.
Yakawedzerwa rutsigiro rwekuisa animation muratidziro. New Animation uye View ma tabo akawedzerwa kune toolbar.
Menyu inopa maturusi ekudhindisa masiraidhi uye kufambisa masiraidhi kumusoro uye kuzasi kwechinyorwa.
Iyo Insert tab ikozvino ine kugona kupinza ichangobva kushandiswa maumbirwo.
Yakawedzerwa tsigiro yekuyera mafomu.
Iyo nharembozha yevapepeti nevaoni yakaisa rutsigiro rwerima dingindira uye yakawedzera bhatani kuratidza rondedzero muspredishiti.
Tora ONLYOFFICE 7.1
Kana ari mapakeji ekuisa, akagadzirira uye anowanikwa pawebhusaiti yavo yeWindows, macOS neLinux (deb uye rpm mapakeji, mapakeji muSnap, Flatpak uye AppImage mafomati. zvakare ichagadzirwa munguva pfupi).
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » ONLYOFFICE Docs 7.1 inosvika nerutsigiro rweARM